Vaovao - Andao hanao lalao fanimbana mololo
Ny plastika dia voatanisa ho iray amin'ireo famoronana lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Ny plastika dia toy ny sabatra roa lela. Na dia mitondra fanamorana ho antsika aza izy io, dia mitondra enta-mavesatra koa ho an'ny tontolo iainana.
Mba hisorohana ny fandotoana fotsy, firenena maro isan-karazany no namoaka andiam-pitsipika nifandimby. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, namoaka ny "Opinions on Extra fanamafisana ny fitsaboana ny fandotoana plastika i Shina". Amin'ny faran'ny taona 2020, ny indostrian'ny famahanam-bola manerana an'i Shina dia mandrara ny fampiasana ny mololo plastika azo simbaina tsy simba.
Amin'izao fotoana izao dia misy karazana mololo telo lehibe nifanena taminay teny an-tsena: Mololo PP, Mololo PLA, ary mololo taratasy.
Avy eo ankavia: mololo taratasy, mololo PLA, mololo PP
Manoloana ny faharatsian'ny ahitra isan-karazany dia nikarakara fifaninanana fanimbana mololo izahay.
Namboly mololo misy fitaovana telo samy hafa izahay tamin'ny tany mba hanahafana ny fahasimban'ny zezika vita amin'ny akora isan-karazany amin'ny toe-javatra voajanahary ary hijerena izay nanjo azy ireo taorian'ny 70 andro:
Taorian'ny 70 andro naharatsy ny zezika, tsy niova ny mololo PP.
Taorian'ny 70 andro naharatsy ny zezika, tsy niova be ny mololo PLA.
Taorian'ny 70 andro naharatsy ny zezika, ny lohan'ny mololo dia mazava ho azy fa simba sy simba.
Valin'ny lalao:Ny amboara taratasy no nandresy tamin'ny fifaninanana fanalam-baraka.
Izahay dia manao fampitahana tsotra ny fahombiazan'ny tontolo iainana amin'ireo mololo telo:
Azo havaozina na tsia
ENY fa mafy be
ENY ary mora